दाङमा भारतीय मजदुरको प्रर्दशन, घर फर्किन पाउनु पर्ने माग « Chhahara Online
दाङमा भारतीय मजदुरको प्रर्दशन, घर फर्किन पाउनु पर्ने माग
- ६ जेष्ठ २०७७, मंगलवार
६ जेठ । दाङका इट्टा भट्टाहरुमा काम गर्ने भारतीय मजदुरले घर फर्किन पाउनु पर्ने माग गर्दै घोराही क्षेत्रमा प्रर्दशन गरेका छन्।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ बडरास्थित इट्टा भट्टाबाट मंगलबार बिहान सयौं भारतीय नागरिक घर फर्किन पाउनु पर्ने माग गर्दै प्रर्दशनमा उत्रिएका हुन्। घोराही – १० नारायणपुर बजार क्षेत्रमा उनीहरुले नाराबाजी गरेका छन्।
दाङ जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी गणेश चन्दका अनुसार घर फर्किन पाउनु पर्ने माग गर्दै इट्टाभट्टामा काम गर्ने भारतीय मजदुर नाराबाजी गरी सडकमा उत्रिएका हुन्। प्रदर्शनमा उत्रिएकालाई आज सम्झाई बुझाई गरेर पठाइएको उनले जानकारी दिए।
उनीहरुको समस्या समाधानको पहल गर्न प्रदेश नं. ५ का प्रदेश प्रमुख डिआइजी रविन्द्र धानुक बाँके गएको एसपी चन्दले बताए। उनले दाङ जिल्लाका दर्जन बढी इट्टा भट्टामा गरेर झन्डै ६ हजारको हाराहारीमा भारतीय मजदुर रहेको जानकारी दिएको खबर सेतोपाटीमा प्रकाशित छ ।
फोटो : लिलाधर वली